Somali News 05.26.21 | KWIT
Somali News 05.26.21
By Halima Osman • May 26, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa mar labaad soo warisay inaysan jirin dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. 6,035 ayaa ku dhintey mudadii safka. Waxaa jira qiyaastii 170 kiis oo cusub, oo leh lix kale oo ka tirsan Degmada Woodbury.
Maaddaama dalabka tallaalka COVID-19 uu sii socdo inuu hoos u dhaco, saraakiisha caafimaadka ee Iowa ayaa sheegay inay aqbaleen boqolkiiba 12 keliya ee qoondada tallaalkeeda ay ka heleen dowladda federaalka toddobaadkan. Taasi waa wax ka yar 8 kun oo qiyaasood.
17 ka mid ah 99ka degmo ee gobolka ayaa aqbalay qayb ka mid ah qoondadooda. Kaliya hal - dhammaantood wuu qaatay.
Sida laga soo xigtay New York Times, 43 boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool Iowa ayaa si buuxda loo tallaalay. Kala sareynta 16aad ee qaranka.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay u dirtay Tilmaamaha la cusbooneysiiyay ee qalinjabinta Sabtida Xarunta Dhacdooyinka Tyson. Degmo dugsiyeedku waxay raacaysaa biilka la saxeexay usbuucii la soo dhaafay ee ka mamnuucaya degmo dugsiyeedku inay soo saaraan amarrada maaskarada. Degmadu sidoo kale waxay xaddiday xadka martida ee xafladaha dhammaan saddexda Dugsi Sare ee Magaalada Sioux. War-saxaafadeed ayaa sheegaya in degmadu qorsheyneyso inay taageerto dhammaan kuwa doorta inay sii wadaan xirashada weji-duubashada ama wejiga qarinaya. Live-durdur ayaa sidoo kale la heli doonaa.
Koox ganacsi oo loogu talagalay soosaarayaasha doofaarka ayaa weydiisanaya Waaxda Beeraha ee Mareykanka inay rafcaan ka qaataan amar garsoore federaal ah oo dhowaan soo saaray kaas oo ku dhuftay sharci federaal ah oo u oggolaanaya dhirta ka shaqeysa doofaarka inay xawaareyso.
Golaha Soosaarayaasha Hilibka Doofaarka ayaa sheegaya in amarka dib loogu noqonayo xawaaraha qadka laga shaqeynayo uu beeraleyda uga fadhiyo $ 80 milyan oo dakhli hoos u dhac ah. Ururada shaqaalaha Hilib cunida ayaa caqabad ku noqday xawaaraha dhaqsaha badan, iyagoo sheegay inay halis gelinayaan caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha. Kooxda soosaarayaasha doofaarka waxay weydiisanayaan USDA inay racfaan ka qaataan xukunka oo ay raadsadaan joogitaan sidaa darteed lix geed oo hada ku shaqeeya xawaare dheereeya.
Somali News 05.25.21
By Halima Osman • May 25, 2021
Guddoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa ku dhawaaqay intii lagu jiray warkiisii ​​ugu dambeeyay ee COVID-19 shirkii jaraa'id ee uu saxiixay amar fulin ah oo lagu joojinayo dhammaan amarradii fulinta ee hore ee la soo saaray intii lagu jiray Faafida Fiditaanka Juun 1.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale soo afjaraya kaqeybgalka gobolka ee $ 300 dowlada dhexe ee COVID-19 faa iidadiisa sababtuna tahay tirada dadka shaqo la'aanta ah ee Nebraskans. Barnaamijku wuxuu joogsanayaa 19-ka Juun.